कोरोना भाइरससंग लड्न ‘कमन कोल्ड’ले सहयोग पु-याउने विशेषज्ञहरुको निष्कर्ष ! « News24 : Premium News Channel
कोरोना भाइरससंग लड्न ‘कमन कोल्ड’ले सहयोग पु-याउने विशेषज्ञहरुको निष्कर्ष !
एजेन्सी, ६ जेठ । विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणसंग लड्न रुघा खोकी (कमन कोल्ड ) ले सहयोग पुर्याउने विशेषज्ञहरूले पत्ता लगाएको छ । यसले केही हदसम्म सुरक्षाको गर्ने आशा जगाएको विशेषज्ञहरूको दाबी छ ।
वैज्ञानिकहरूले त्यस्ता कोषहरू पत्ता लगाएका छन् जुन कोरोनालाई व्यक्तिको रक्तप्रवाहमा आक्रमण गर्न सक्दछन् । जसलाई पहिले पनि कमन कोल्ड लागिसकेको हुन्थ्यो । यी सबै कोरोना भाइरसका अन्य प्रकारका कारणहरू हुन् । विशेषज्ञहरूले विश्वास गरेका छन् कि अन्य रोगहरु भन्दा कोरोनाले धेरै गम्भीर असर गरिरहेको छ भन्ने ।
यद्यपि क्यालिफोर्नियाको ला जोला इन्स्टिच्युट फर इम्यूनोलोजीका अन्वेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि उनीहरूको यो अनुसन्धान प्रयोगशालाको बाहिर अझै प्रमाणित हुन सकेको छैन। सेलको बारेमा विशेषज्ञहरूको यो अध्ययन एक पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ । मानिसमा हरेका प्रतिरक्षा कोशिकालाई टी सेल भनेर चिनिन्छ । जुन बी सेलहरू भन्दा फरक हुन्छ जसले एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्दछ ।
टी सेलले अन्य संक्रमित कोशिकालाई लक्षित गरेर आक्रमणको अर्को रेखा प्रदान गर्ने जनाइएको छ। म्यानचेस्टर युनिभर्सिटीका इम्युनोलजीका प्राध्यापक डान डेभिसले टाइम्सलाई भने, ‘जब कोष एक कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन्छ, तब भाइरसको प्रोटीन अणुहरू एकदमै सानो टुक्रा हुन्छन्, र, ती साना टुक्राहरू सेलको सतहमा राखिन्छन्। जब टी सेल यी अणुहरू देखिन्छन् जुन शरीरमा पहिले कहिल्यै भएको हुदैन, तब तिनीहरू जान्छन् र संक्रमित कोषहरूलाई जवाफ दिन्छन्।’
क्यालिफोर्नियाको ला जोला इन्स्टिच्युट फर इम्यूनोलोजीका अन्वेषकहरूले कोरोनाबाट निको भएको बिरामीहरूको रगतलाई जाँचेर सेलको बारेमा पत्ता लगाएका हुन् । उनीहरूले पत्ता लगाएका टी सेलहरू जुन उनीहरूको रगतमा थियो । र, त्यसले नयाँ भाइरसलाई आक्रमण गरेको अवस्था पाइएको थियो ।